बझाङमा सरकारकाे नीतिलाई नै चुनौती : हजारौँको भीडमा मनाइयो ‘चैतली मेला’ – Online Nepal
बझाङमा सरकारकाे नीतिलाई नै चुनौती : हजारौँको भीडमा मनाइयो ‘चैतली मेला’
बझाङ, २६ चैत्र । विश्वभरि नै कोरोना महामारी र त्रास फैलिरहेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लामा भने भव्य रुपमा मेला सम्पन्न गरिएको छ ।जिल्लाको छबिसपाथिभेरा गाँउपालिकामा बान्नीको ‘चैतली मेला’ लागेको हो । सधैँका वर्षझैँ यस वर्ष पनि मेला भव्य तरिकाले सम्पन्न भएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । सधैँका वर्षहरुमा रातिसम्म मेला लाग्ने गरेको भए पनि यस वर्ष भने बिहानदेखि नै सुरु भएको मेला बेलुका समापन गरिएको थियो । मेलामा स्थानीय बासिन्दा तथा गाँउपालिकाका सबै स्थानीय बासिन्दा आ–आफ्नो घरमा ताला लगाएर मेला भर्न पुगेका थिए ।
भीडभाडबाट कोरोना संक्रमण हुने भन्दै सरकारले देशभरि नै कडा लकडाउन लगाएको छ । तर यहाँका स्थानीय बासिन्दाले भने लकडाउनको बेवास्ता गर्दै मेला सम्पन्न गरेका हुन् ।
यहाँ धेरै जस्तो स्थानीय बासिन्दा यही मेलाका लागि केही समयअघि मात्रै भारतका विभिन्न सहरबाट गाँउघर भित्रिएका स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरु सरकारी क्वारेन्टाइनमा नबसेर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका भए पनि धेरैजसोे त मेलामा सहभागी भएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले मेला आयोजना नगर्न र लकडाउनको पुर्ण पालना गर्न निर्णय गरेरे जारी गरे पनि उक्त निर्णको समेत बेवास्ता गर्दै हजारौँको सहभागितामा मेला सम्पन्न गरिएको छ ।बझाङको छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका वडा नं. ३ को बान्नीचौरमा चैतली मेला लागेको हो । हरेक वर्षको चैत्र शुक्ल त्रेयोदशीका दिन मनाइने बान्नीको चैतली मेला यस वर्ष चैत्र २४ गते परेको थियो ।
सरकारले बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न तथा सभा–सम्मेलन, मेला–जात्रा, अनावश्यक भीडभाड नगर्न भनेको छ । बान्नी मेलामा भने सरकारको नीतिलाई नै चुनौती दिइएको छ ।
यसरी सरकारकै नीति उल्लंघन गरी मेला मनाइएको विषयमा गाँउपालिका उपाध्यक्ष राधिका रताला जोशीलाई सोध्दा स्थानीयले अटेर गरेको बताइन् । गाँउपालिकाले यसपालीको चैतली मेलामा भीडभाड गरी मनाउन रोक लगाउँदा पनि स्थानीयले अटेरी गरेर मेला सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । आफूहरुले गाँउपालिकाका विभिन्न नाकाहरुमा प्रहरीलाई परिचालन गरेको भए पनि चोरबाटो प्रयोग गरेर मेलामा उपस्थित हुनेहरु संख्या बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच प्रसिद्ध चैतली मेलामा तल्लोछबिस र माथ्लोछबिस बीच भकुण्डो खेल्दा विवाद भएपछि दुई जना घाईते भएका छन् ।दुई पक्षबीच ढुङ्गा–मुढा हानाहान भएपछि दुईजना घाइते भएका हुन् । स्थानीयका अनुसार सोमबार साँझ करिब ५ः३० बजेको समयमा दुबै पक्षबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो ।मेला स्थलमा प्रहरीको उपस्थिति नभएको पनि जनाइएको छ । सोही कारण पनि ढुङ्गा हानाहान भएको स्थानीयले बताए ।
सुदूर पश्चिमको प्रसिद्ध मेला मानिने बान्नीकी चैतलीमा हजारौं श्रदालु तथा दर्शनार्थीहरु भेला हुने गर्छन् । यसपालि पनि हजारौँले बान्नीको काँकर (लिंगो) र बान्नी मष्टा (कुलदेवता) को दर्शन गरेका छन् ।परापुर्वकालमा महिसासुर दानवले बान्नी मष्टा देवतासंग युद्ध गरी मष्टालाई पासोमा पारेको र मष्टालाई दानवको पासोबाट मुक्त गर्नका लागि सुर्मा देवी प्रकट भई महिसासुरको बध गरेको खुसीयालीमा बान्नीकी चैतली मेला मनाउने गरिएको छ ।
सुर्मा देवीले भाला प्रहार गरी दानवको बध गरेको प्रतीकका रुपमा चैत्र औंसीका दिन काटेको काँकर (लिंगो) लाई चैत्र शुक्ल त्रयोदशीका दिन तोलेनी भन्ने खेतमा हिँडाउने गरिन्छ । झण्डै ४०–५० मिटर लामो काँकरलाई मानिसहरुले बोकेर ३ सय मिटर जति हिँडाउने गरिन्छ ।
यसरी हिँडाएर ल्याएको काँकरलाई बान्नी मष्टाको मन्दिरमा चढाएपछि राक्षसको टाउकोको भकुण्डो बनाएर सुर्माले खेलेको सम्झनामा तल्लो छबिस र माथ्लो छबिसका बासिन्दाहरुबीच भकुण्डो खेल्ने प्रचलन रहेको छ ।यसरी काकंर हिँडाएको र भकुन्डो खेलेको हेर्नका लागि बझाङ जिल्लालगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौं मानिसहरु साविक कँडेल गाविसको बान्नी चौरमा पुग्ने गर्दछन् । यसपाली भने विगतको जत्रो भीड नभएको बताइएको छ ।
राक्षसलाई मारी सकेपछि सुर्मा देवीले पेटको छाला निकालेर दमाहा बनाएको र हातका औँलाको नगरा (गजा) बनाई विजय उत्सव मनाएको किंवदन्ती छ । सोही परम्परा अनुसार यस वर्ष पनि मेला सम्पन्न गरिएको हो ।चैतली मेला हेर्नकै लागी भनेर सुदूरपश्चिमका साथै भारत बाट समेत दर्शालु भत्तजनहरु मेलामा पुग्ने गरेका भए पनि यस वर्ष भने बाहिरबाट कोही पनि दर्शालु भक्तजनहरु नपुगेको बताइएको छ ।
जोखिममा सुदूरपश्चिम, झनै जाेखिम बझाङमा
नेपालमा कोरोना भाइरसको सबैभन्दा उच्च जोखिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । यसै समयमा बझाङ झन् यसको उच्च जोखिममा देखा परेको यहाँका जानकारहरु बताउँछन् । भारतबाट आएकाहरु समेत खुलेआम मेला र गाउँघर डुलिरहँदा जोखिम बढेको हो ।देशमा लकडाउन भएको समयमा बझाङका ग्रामीण बस्तीहरुमा भने यसको प्रभाव देखिएको छैन । जिल्लाको सदरमुकाम सुनसान भए पनि जहाँ प्रहरी, प्रशासनको पहुँच छैन, त्यहाँ भने स्थानीय बासिन्दाले भीडभाड गर्ने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाभन्दा बाहिर र भारतबाट समेत यहाँका ग्रामीण बस्तीहरुमा स्थानीयहरु पुगेका छन् र स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा नबसेर उनीहरु सिधै आ–आफ्नो घर गएका छन् । केही व्यक्ति भने २–३ दिन मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेर भागेर आफ्नो घर गएको पाइएको छ ।२२ गते मात्रै बिथ्थड–चिर गाँउपालिकामा ३८ जना क्वारेन्टाइनबाट भागेर गएका छन् । यस्तै दुर्गाथली गाँउपालिकामा ३५ जना गाँउपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा नबसेर आफ्नो घरमा भागेर गएको स्वास्थ्य कार्यलयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।हाल जिल्ला भरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएका ५ जना महिला, ३१२ जना पुरुष र ५ जना बालबालिका गरेर जम्मा ३२७ जना बसेका छन् ।
Prevआज राति आकासमा देखिएको चन्द्रमाको फरक रङ : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी फैलिएको बेला, यो राम्रो योग नभएको ज्योतिषको भनाइ !
Nextकोरोना महामारीको उद्गमस्थल वुहान सहरमा तीन महिनापछि लकडाउन हटाइयो !
वर्षौंपछि करिश्मा र राजेश एकैसाथमा, जब राजेश हमालले करिश्मालाई यस्तो भने (भिडियोसहित)
सियोनालाई गायिका रचना रिमालबाट यति ठूलो सहयोग; सम्भव हुनेले आर्थिक नहुँदा से-यर गरेर सहयोग गरौ